Ny eropeana dia tsy hanana veto handray solosaina finday amin'ny sidina mankany Etazonia | Vaovao momba ny gadget
Farany, tsara ny vaovao ho an'ireo mpampiasa izay matetika mitsangatsangana any Etazonia avy any Eropa raha niresaka herinandro lasa izay izahay momba ny mety hidiran'ny Etazonia amin'ny tranokalan'ny fitaovana elektronika mihoatra ny haben'ny finday avo lenta . Mazava ho azy fa ao anatin'ireto fepetra ireto no ahitanao solosaina finday, takelaka, console ary fitaovana elektronika hafa saingy toa ny fenitra tadiavin'ny Departemantan'ny Fiarovana An-trano any Etazonia ho an'ireo sidina eropeana ireo Tsy ho tanterahina io na eo aza ny fisian'ny karazana fepetra fiarovana hafa.
Ho an'ireo izay tsy nahazo namaky ny vaovao dia manaraka izany ny fameperana ny fidirana amin'ireo fitaovana ireo izay napetraky ny Departemantan'ny fiarovana ny tanindrazana any Etazonia miaraka amin'ny sidina avy any amin'ny firenena toa an'i Afrika sy Moyen Orient. Natao izao fa ny sidina sasany avy amin'ny Vondrona eropeana dia tafiditra ao anatin'ity fepetra fiarovana ity ihany koa ary manery ireo mpampiasa hanamarina ao amin'ny solosain'izy ireo.
Amin'ireo fepetra tadiavin'izy ireo hampiharina ireo dia manamafy ireo scanner matotra kokoa na ny fampiasana teknolojia izay mahita ny fihetsiky ny mpandeha alohan'ny hiakarany amin'ny fiaramanidina. Ary io ny Fikambanan'ny fitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena, manazava fa raha ampiharina amin'ireo sidina ireo fanitsiana voalohany, dia hihatsara ny fiarovana azy ireo ary fatiantoka an-tapitrisany (eo amin'ny 1.100 tapitrisa dolara) no hialana amin'ny tsy famelana ny mpandeha hampiakatra ireo fitaovana ao anaty fiaramanidina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ny eropeana dia tsy hanana veto handray solosaina finday amin'ny sidina mankany Etazonia